Saif Iyo Xaaskiisa Kareena Oo Waqti Wacan La Qaadeen Qaar Ka Mid Ah Xidigaha Bollywood-ka - Hablaha Media Network
Saif Iyo Xaaskiisa Kareena Oo Waqti Wacan La Qaadeen Qaar Ka Mid Ah Xidigaha Bollywood-ka
HMN:- Lamaanaha caanka ah Saif Ali Khan iyo Kareena Kapoor Khan ayaa la sheegay in waqti wacan ay wada qaateen xalay sidoo kalena qaar ka mid ah xidigaha Bollywood-ka kulan isla qaateen.
Waxaa la xaqiijiyay in Saif iyo Bebo waqti la qaateen saaxiibadooda u dhow deegaankooda ilaa 5:00 aroornimo ama subaxnimo laga gaarayay waxaana laga wada qayb galay xaflad ka dhacday guriga Sanjay Kapoor.
Inkastoo Saif iyo Kareena ay asxaabtooda xalay oo dhan la joogeen hadana wiilkooda yar Taimur Ali Khan guriga ayaa looga soo tagay qaybna kama noqon karin caweyskii xalay.
Saxaafada ayaa niyad jab ka qaaday markii ay kusoo xoomeen Saif iyo Kareena waxayna isla haayeen Taimur ayaa la socdo ee sawiro badan ka qaata balse midaas ma dhicin.
Sidoo kale kulankii waqti la wada qaadanayay xalay waxaa Saif iyo Kareena ku wehliyeen xidigaha kala ah Sanjay Kapoor, Arjun Kapoor iyo Director Karan Johar.
Fadlan Sawiro Dheeraad Ah Hoos Kaga Bogo: